I-Pendant Ephakeme kakhulu ye-Abraxas yokulawula impilo yakho nokufeza konke - World of Amulets
I-Pendant Ephakeme ye-Abraxas ukulawula impilo yakho nokufeza konke okudingayo
Kusele izinto eziyi-80
Material I-Supreme Colour Amulet Ayisebenzi I-Supreme Colour Amulet yenziwe yasebenza
I-Supreme Colour Amulet Ayisebenzi
I-Supreme Colour Amulet yenziwe yasebenza
Lesi yisigqoko esisha esikhulu se-Abraxas kanye neMimoya yama-Olimpiki. Ayithathi indawo yamanye amamodeli esinawo kepha le ntelezi yenzelwe imiphumela esheshayo futhi iqeda umkhawulo wokuthi akekho umuntu ongathinta i-amulet.
Njengoba wazi, iziphandla ezijwayelekile azikwazi ukuthintwa abanye abantu, okwenza kube nzima ukugqoka kubonakale kwabanye. Ngemuva kokwenza izikhonkwane ze-lapel, ezingathintwa futhi zibonwe, sihlangabezane nesixazululo esihlanganisa i-2. Ayibeki kabusha isiphandla hhayi iphini lebhande kodwa kunethezeke kakhudlwana ukugqoka.
Ngalesi sigqoko abantu bangabona futhi bathinte isiphandla sakho, lapho abantu beyibona kakhulu intelezi, kuzobangcono futhi kusheshe ukubona amandla okwenza izimangaliso, njengephini le-lapel, kepha amandla alo aqinile njengephini le-lapel.
Ngakolunye uhlangothi, i-amulet izosebenza ngokugcwele ngemuva kwezinsuku ezingama-28 futhi amandla ayoqala ukukhula kusukela ngaleso sikhathi. Le yi-amulet ephelele uma ufuna amandla e-amulet ejwayelekile ngemiphumela esheshayo yephini le-lapel. (imiphumela ye-lapel pin ithola izinsuku ezi-3 - 7 futhi lokhu kuyinhlekelele ezinsukwini eziyi-10) nokukhululeka kwengqondo ukuthi akunandaba uma othile ethinta isiphandla sakho.
Okuwukuphela kwento ebabayo kulokhu ukuthi i-amulet idinga ukuhlanzwa iphinde ikhokhiswe kabusha njalo ezinyangeni eziyi-9. Ungazenzela ngokwakho ngephedi yokushaja noma u-ode le sevisi kithi.
Lesi sinhlamvu esikhethekile se-Abraxas singakusiza ngezindlela eziningi ongakuthola kunzima ukuzikholelwa. Bheka nje izibuyekezo bese uzibonela ukuthi bangaki abantu abathole izinzuzo ezinkulu zalesi sikhulu.
Ngabe le pendant ingakwenzelani?
Imimoya yama-Olimpiki namandla abo bayakwazi konke:
I-Arathron inamandla amaningana azokusiza kakhulu.
Uyakwazi ukusebenza esikhathini esedlule, esamanje nezekusasa. Lokhu kuzokusiza ukubhekana nezinkinga zakudala. Ukuzilungisa ukuze zingabi nomthelela omubi okwamanje.
Muhle futhi kukho konke okuphathelene nemvelo, izitshalo ezikhulayo, ubuningi ekuvuneni, nokwazi amandla okuphulukisa ezitshalo
Amandla akhe amakhulu wesithathu ukuvikela indlu yakho noma ezinye izakhiwo
Bethor omunye weMimoya enamandla kakhulu awusizo
IBhethor umoya omuhle kakhulu wokuthola ubulungiswa. Uma unengxabano, uzoqinisekisa ukuthi ubulungiswa buyenziwa. Ilungele izindaba zasenkantolo kepha futhi nezingxabano nomndeni noma nabangane
Ukuhlakanipha kungenye yamandla amakhulu eBethor. Ukwazi ukuthi yisiphi isinyathelo okufanele usithathe akusiyo njalo indaba yomqondo. UBethor uzokwazisa ngokuhlakanipha kwakhe okungenamkhawulo ukuthi iyiphi indlela engcono yokwenza kunoma yisiphi isimo
Amandla amakhulu wesithathu weBethor iqiniso lokuthi uzothenga inala. Lokhu kusho ubuningi bezempilo, Uthando, Ingcebo, Abangane, Izakhiwo, Amandla, Ukuvikelwa njalonjalo. Lokhu kungenye yamandla okunyusa amanye amandla omoya
Phaleg umoya wokukhulisa
UPhaleg uthola ukuthula. Uma usesimweni esineziyaluyalu, uzokusiza wehlise imizwa enokhahlo futhi wakhe indawo yokuqondana.
UPhaleg, njengoBethor futhi unguchwepheshe kwezobulungiswa, uxazulula izingxoxo nokuhlinzeka ubulungiswa kubo bonke
Uma udinga ukuvikelwa komuntu siqu, uPhaleg umoya wokukhuluma naye. Ungumvikeli onamandla wabancane nabadala, abesilisa nabesifazane. Uvikela ekuhlaselweni ngokomzimba, ngokwengqondo nangokomoya. Lo moya uphinde ube ngumvikeli wabathakathi.
Amandla akhe amandla akhulisa amandla ayo yonke eminye imimoya ebenza babe namandla kakhulu futhi babe namandla.
Och Amandla amabili abalulekile
Amandla okuqala e-Och, umbusi welanga amandla okuthola ingcebo. Uheha ingcebo nokuchichima komuntu omhloniphayo ngokugqoka isiphandla sakhe
Amandla amakhulu wesibili amandla okuphulukisa. I-Och izokusiza ukuziphulukisa kanye nokunye ezingeni lomzimba, ngokwengqondo nangokomoya.
Hagith Umoya onamandla amakhulu
Noma yini ehlobene nothando, i-hagith izoyenza. uma ufuna ukuthola uthando lweqiniso, qinisa ubudlelwano bakho, lungisa ubuhlobo, ubuyise isithandwa. UHagith angakwenza lokhu
UHagith ubuye abe ngumoya okunikeza ukuheha ngokocansi, ukuqina kanye nenkanuko
Abaculi nabadali nabo bazuza kakhulu emandleni wesithathu kaHagith. Lo moya omangalisayo uthuthukisa ubuhlakani bakho kuwo wonke amazinga. Akunandaba noma ngabe ungumdwebi, umbhali, umculi, umdansi, noma yini oyenzayo njengomuntu onobuciko, uHagith ungumoya ongaphendukela kuwo.
Uma ufuna ukuthandwa ngumphakathi, uzodinga amandla akhe wesine. UHagith unikeza uGrace ukuze abantu bakuthole umuhle, umnandi, unomusa, uyakhanga nokunye
Amandla alandelayo amangalisayo alo Moya okhethekile wama-Olimpiki amandla akhe okuthuthukisa ubuhle. Hhayi kuphela ngokomzimba, kodwa nangaphakathi, ubuhle bokomoya.
Futhi ekugcineni amandla amakhulu we-5 ukuhlinzeka ngenjabulo. Kungasekho izinsuku ezimnyama, izikhathi ezidabukisayo noma usizi. UHagith uzobaphendulela kokuphambene.
Ophiyeli amandla okubopha futhi akhethekile ngamakhono e-psychic
I-Ophiel inamandla amabili amakhulu abaluleke kakhulu. Owokuqala ukuthuthukisa amakhono engqondo. Uma ungumuntu ophakathi, empath, umfundi we-tarot noma umlaphi ophelele, la mandla akhethekile ka-Ophiel azokusiza kakhulu.
Amandla wesibili ka-Ophiel amandla omlingo azothuthukisa wonke amakhono omlingo okungenzeka usuvele unawo kepha nezinye iziphandla ozigqokayo.
Phul ngokubhula namandla okuhlanganisa
UPhul wenza inhlanganisela efanele yamandla ayo yonke eminye imimoya edingekayo esimweni ngasinye. Akunasidingo sokukhathazeka ukuthi ungaphendukela kumuphi umoya. UPhul uzokwenzela lokhu.
Amandla wesibili kaPhul yiDucination. Uzokulethela imilayezo oyidingayo ukuze uthathe izinyathelo ezifanele kepha uzodlulisela nezifiso zakho kweminye iMimoya yama-Olimpiki.
Lesi yisifingqo samandla amakhulu eMimoya yama-Olimpiki eyi-7, anamandla amanye, angabalulekanga kangako kepha okubaluleke kakhulu ukuthi inhlanganisela yabangu-7 kule ndumezulu emangalisayo ikhulisa amandla eziphonso ngo-100.
Le amulet ingenza ngokuphelele konke ongakufisela khona. Akusheshayo. Leli akulona iphilisi, kepha lizosebenza ngokushesha, kuzo zonke izici zempilo yakho. Uma kunentelezi eyodwa ongathanda ukuyithola, THOLA LOKHU. Ayikho enye intelezi ehlanganisa imimoya namandla amaningi.
Ibinzana eliphezulu nelingezansi ku-amulet lise-latin bese lithi:
amandla e-Abrasax unami. ngiyala imimoya
USemper Ad Meliora
Njalo ukuze kube ngcono
Ukuphela kwento okufanele uyenze ukuyigqoka. Akukho okunye, okuthembisiwe. Akudingeki unikele noma unikele nganoma yini. I-Abrasax kanye ne imimoya yama-olympic ngizohlala nginawe ukukusiza.